China Backpack T-B3936 Kugadzira uye Fekitori | TIGERNU
TIGERNU lightweight yemaguta bhegi
Yakasimba Bhegi: Chikoro bhegi rakagadzirwa neakakura density 200D * 100D Polyester, isingadziviriri misodzi uye inodzivirira mvura. Inotakurika mubato ine mbiri yakasimbiswa kusona, iri nyore uye inorema mutoro.Severa iwe pamwe nehunyanzvi hofisi yebasa bhegi, tetepa USB kuchaja bagpack, koreji chikoro chepamusoro mudzidzi bhegi.
Unyanzvi: Kurema: 0.73kg. Unyanzvi: 18 L. Saizi yekunze: 45 * 30 * 17cm (L * H * W). Unogona kuiswa pasi pechigaro chekufamba nendege. Laptop slot: inobata kusvika 15.6 - laptop. Bhegi rakasarudzika rekushandisa zuva nezuva, chikoro chesekondari, kambasi, basa, mutyairi, bhizinesi kuenda, kufamba uye zvipo zvikuru kune wese munhu waunoda.Iyo yakarongedzwa mutyairi bhegi ine fungidziro yakagadzirirwa 1 huru kamuri (ine padhed muhomwe yelaptop uye zipi homwe yekambo , pasipoti nezvimwewo), homwe mbiri dzeparutivi dzemabhodhoro emvura uye amburera, 1 yakazvimiririra yeRFID zipi muhomwe kumusana kwefoni / chikwama uye zvinhu zvemunhu. Ungashanda zvakanyatsonaka kubhizimusi kuenda uye kukoreji chikoro
Feature: Kunze USB chiteshi uye yakavakirwa mune inotsvaga USB tambo dhizaini ita kuti iyi USB bhegi rive nyore kubhadharisa nharembozha yako pasina kutora yako simba bhengi. Back back mukwende sleeve dhizaini yekufamba bhegi inobvumira iyo inokwana pane mukwende / sutukesi kuti zvive nyore kutakura; Bhegi kadhi slot uye zuva girazi mubati dhizaini, inokodzera yako yaunogara uchishandisa zvinhu; Rakakiyiwa zipi uye hombodo yeRFID yekuchengetedza zvakanyanya
Iyo zvakare yakasununguka padded laptop bhegi ine yakakwira elasticity chipanji chakapetwa pamafudzi mabhandi ane ergonomic S chimiro dhizaini, yakasununguka pamapfudzi ako kunyangwe kana uri pasi peiyo yakazara mutoro. Padding kumashure dhizaini kune imwe nyaradzo. Yakapetwa palaptop / peti yepiritsi yekuchengetedza mudziyo wako mushe.
Kugamuchirwa kushopu naTigernu.
Model Nhamba T-B3936
Ruvara: Rima grey
Kurongedza: 30pcs / ctn
Saizi: 45 * 30 * 20cm
Pashure: Mukwende T-B3928
Zvadaro: Mukwende T-B3933A
zuva nezuva shandisa mukwende
fashoni masaga evarume